ပုံပြင်တို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပုံပြင်တို
Posted by nigimi77 on Feb 18, 2011 in News |5comments
Forward Mail မှပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
အဆောက်အဦးတစ်ခုရှေ့မှာ မျက်မမြင်ကောင်လေးတစ်ယောက် ဦးထုပ်တစ်လုံးကို ခြေထောက်နားချထားပြီး ထိုင်နေတယ်။ “ကျွန်တော်မျက်မမြင်တစ်ယောက်ပါ.
.ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီကြပါ.” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးချပြီးတော့ပေါ့။ ဦးထုပ်ထဲမှာတော့ အကြွေစေ့လေးအနည်းငယ်ပဲ တွေ့ရတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ လူတစ်ယောက် အဲဒီကောင်လေးအနားဖြတ်လျှောက်လာတယ်။ သူ့အိတ်ထောင်ထဲက အကြွေစေ့ အနည်းငယ် ထုတ်ပြီး ကောင်လေးရဲ့ ဦးထုပ်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့.. ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်ဝေ့၀ိုက်ကြည့်လိုက်ပြီး.. ကောင်လေးထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး.. စာအနည်းငယ်ကို နောက်ကျောမှာရေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လူတိုင်းမြင်နိုင်မဲ့ ဘက်ကို သူရေးထားတဲ့စာလေးမြင်သာအောင် ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုထောင်ထားလိုက်တယ်။
မကြာခင်မှာပဲ.. ဦးထုပ်လေးထဲမှာ ပြည့်လုပြည့်ခင်ပါပဲ။ လူတွေက အဲဒီမျက်မမြင်ကောင်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ငွေသားတွေပေါ့။ အဲဒီ နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာပဲ ကောင်လေးရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို စာပြောင်းရေးခဲ့တဲ့သူ ပြန်ရောက်လာတယ်.. သူရေးခဲ့တာ ဘယ်လောက်အကျိုးဝင်တယ်ဆိုတာ ကြည့်ရန်ပေါ့.။ ကောင်လေးက လဲ အဲဒီလူရဲ့ခြေသံကို မှတ်မိတယ်လေ.. သူကိုမေးလိုက်တာပေါ့..“ခင်ဗျားက..ဒီမနက်မှာ ကျွန်တော့်ဆိုင်းဘုတ်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့သူ မဟုတ်လား? ခင်းဗျားဘာတွေရေးခဲ့တာလဲဗျ?”
အဲဒီလူကပြန်ပြောတယ် “ငါအမှန်တရားကိုပဲ ရေးလိုက်တာပါ. ဒါပေမယ့် ငါရေးလိုက်တာနဲ့ မင်းရေထားတာက နည်းလမ်းမတူဘူးကွ”။ အဲဒီလူ ဘာရေးခဲ့သလဲဆိုတော့..
တူတာပေါ့ဗျာ.. ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးက ကောင်လေးဟာမျက်မမြင် တစ်ယောက်ပါဆိုတာ ဖော်ပြထားတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပထမဆိုင်းဘုတ်က ကောင်လေးမျက်မမြင်ဘူးဆိုတာ ရိုးရိုးလေးရေထားတာလေ။ ဒုတိယဆိုင်းဘုတ်ကျတော့.. လူတွေ အရမ်းကိုကံကောင်းကြတာပဲ. သူတို့တွေက မျက်မမြင်တွေ မဟုတ်လို့လေ။
ဒုတိယဆိုင်းဘုတ်က အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့မြင်ရပြီမဟုတ်လား?
လူတစ်ဖက်သားကို ကျေးဇူးတင်ရာမှာ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ စဉ်းစားကြံစမှုတွေကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြောဆိုဖေါ်ပြတတ်ဖို့ပါပဲ…
တခြားသူများကို..ကောင်းမွန်သော ဥာဏ်ပညာနှင့် ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ဘ၀မှာ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ၊ ပူဆွေးဝမ်းနည်းစရာ အချစ်ကိစတွေနဲ့ မနေထိုင်ပါနဲ့။ ဘ၀က မင်းကို ငိုကျွေးစရာ အခု ၁၀၀ ပေးလာခဲ့လျှင်.. မင်းမှာ ရယ်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ရာ အခု ၁၀၀၀ လောက် ဘ၀ကို ပြန်ပြလိုက်ပါ။ မင်းမှာ ၀မ်းနည်းပူဆွေးစရာတွေ မရှိခဲ့ဖူးလို့ သဘောထားလိုက်ပါ။ လက်ရှိဘ၀ကို ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါ။ အနာဂတ်အတွက် ကြောက်ရွံမှုတွေကင်းရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။ ယုံကြည်မှုကို ချုပ်ကိုင်ထားပြီးတော့ ကြောက်ရွံမှုကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ကောင်းပါတယ်… Shared လုပ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ…
ကောင်းပါတယ် အကျိုးတစ်ခုကို ရတယ်
စကားဖြစ်ဖြစ် စာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်ရေးတာ ပြောတာက သာမန်ထက် ပိုကောင်းတယ်လေ
ပိုပြီးတော့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ် ပေါ့ နော်
ကောင်းပါလေ့ဗျာ …. သာမန်အနေနဲ့ ဘယ်သူမှ မတွေးမိတဲ့ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး တစ်မျိုးလို့ ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ….. ဖောက်ထွက်တွေးခြင်းလို့ ယူသော် ရကောင်းပါရဲ့ …..
heart ထိအောင်ပြောနည်းပေါ့နော်။ ကျေးဇူးပါ။
when i set up for my life—-
but when i had been read this story,,, i get to know what can i do it.
i just do the best my life^^
that’s so good…